तोरी, सूर्यमुखी र ओलिभ तेलको के छ फाईदा र बेफाईदाहरु? « LiveMandu
१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार २२:३५
कुनै पनि खानेतेल किन्नु भन्दा अगाडि यसमा ३ वटा कुराहरुको मात्रा हेर्नुपर्छ । पहिलोः सैचुरेटेड फ्याट, दोस्रोः पोली अनसैचुरेटेड फ्याट र मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट । सैचुरेटेड फ्याट ले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्र्याउँछ, त्यसैले यसको मात्रा जति कम भए राम्रो हुन्छ । मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट ले शरीरलाई फाइदा गर्दछ, त्यसैले यसको मात्रा बढी हुनु राम्रो मानिन्छ । पोली अनसैचुरेटेड फ्याट को मात्रा बढी हुनु पनि राम्रो हो । मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट लाई पोली अनसैचुरेटेड भन्दा राम्रो मानिन्छ । सैचुरेटेड र ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यकोलागि हानिकारक हुने भएकोले यसको मात्रा जति कम भए राम्रो हुन्छ ।
यो तेल तोरीको बीउबाट उत्पादन गरिन्छ । यसमा ६० देखि ७० प्रतिशत मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट हुन्छ । यसमा १५ देखि २० प्रतिशत पोली अनसैचुरेटेड फ्याट र १० देखि १५ प्रतिशत saturated Fat हुन्छ । तोरीको बीउमा प्रशस्त Omega3Fatty Acid, Iron, Zinc, Calcium आदि तत्वहरु पाइन्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि लाभकारी मानिन्छ । तोरीको तेलमा Omega6र Omega3को अनुपात सर्वोत्तम भएको तथ्य प्रमाणित छ । यो अनुपात राम्रो भएको खानेकुरा मुटुकोलागि अत्यन्तै स्वस्थकर मानिन्छ र यसले मुटुमा ब्लोकेज हुनबाट जोगाउछ । ओलिभ तेल भन्दा पनि तोरीको तेलमा Omega6र Omega3को अनुपात राम्रो भएको पाइन्छ । आयुर्वेदको अनुसार यो तेललाई शरीरको मसाज गर्न र Antibacterial को रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले शरीर बलियो बनाउनुको साथै रत्तसञ्चारमा सुधार ल्याउछ भन्ने धारणा छ ।
यो तेल सूर्यमुखी फूलको बिउँबाट उत्पादन गरिन्छ । यो स्वादमा हल्का हुन्छ र यसमा धेरै भिटामिन E पाइन्छ । यसमा प्रशस्त मोनो अनसैचुरेटेड फ्याट र पोली अनसैचुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यसमा धेरै कम Saturated Fat हुन्छ । अहिले यो तेलको प्रयोग बढ्दै गएको छ, किनभने यो शरीरको लागि फाईदाजनक हुन्छ भन्ने धारण छ । तर यसको धेरै प्रयोग गर्नाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु सृजना हुनसक्छ ।
यो तेलमा पनि फ्याट बढी हुने भएकोले र फ्याटले प्रशस्त क्यालोरी प्रदान गर्ने हुनाले यसको धेरै प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ । हुनत यसले शरिरमा नराम्रो कोलेस्ट्रोल त्यति बढाउँदैन, तर धेरै प्रयोगले मोटोपनाको सम्भावनाको बढाउन सक्छ । यो तेलको एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्नु हुदैन । अर्थात सूर्यमुखी तेललाई Reuse and Reheating गर्नुहुँदैन ।
लेखक डा. ओम मुर्ति अनिल पेशाले मुटुरोग विशेषज्ञ तथा सामान्य जीवनमा आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रको शैक्षिक तथा व्यवहारीक ज्ञानहरु सामाजिक सञ्जाल तथा वहाँकै वेबवसाइट http://www.drommurtianil.com बाट विभिन्न आलेखहरु सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ ।
#सूर्यमुखीको तेल (Sunflower Oil)